WKG ၏ယုံကြည်ချက်များ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာအနှံ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
ကျမ်းစာ၏သက်သေခံချက်အရဘုရားသခင်သည်ထာဝရ၊ တူညီတော်မူသော်လည်းမတူညီသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည့်ဖခင်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ သူသည်တစ်ဆူတည်းသောစစ်မှန်သောဘုရားသခင်၊ ထာဝရ၊ မပြောင်းလဲနိုင်သော၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်၊ ကိုယ်တော်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသော၊ စကြဝtheာကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်။ လူသားတို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအပေါ်တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသော်လည်းကောင်းပြုမူသည်။ ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အဆုံးမဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် ဘုရားသခင်ဦးခေါင်း၏ ပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး၊ မူလအစမရှိသော၊ သားတော်သည် ထာဝရကာလမတိုင်မီ မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သားတော်အားဖြင့် ထာဝစဉ်ကြွလာတော်မူသော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ သားတော်အားဖြင့် မြင်နိုင်သမျှ မမြင်နိုင်သော အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော ခမည်းတော်သည် သားတော်ကို ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှာ စေလွှတ်ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသစ်ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများအဖြစ် လက်ခံခြင်းအတွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ပေးတော်မူ၏။ (ဂျိုဟန် 1,1.၁၄၊ ၁၈; ရောမ ၁5,6; ကောလောသဲမြို့ 1,15စာ-၄၆; ယော 3,16; 14,26; 15,26; Römer…
ဘုရားသခငျသညျသားတျောဘုရားသခငျသညျထာဝရဘုရားထံမှဖွားမြင်, ထိုနတ်ဘုရား၏ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်သူ့အားဖြင့်ခမည်းတော်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ပုံသဏ္isာန်ဖြစ်ပြီး၊ ခမည်းတော်သည်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေရန်ဇာတိပကတိ၌ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူသည်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၏ပconိသန္ဓေစွဲ။ အပျိုစင်မာရိမှမွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်ဘုရားသခင်နှင့်အပြည့်အဝရှိပြီးလူသားတစ် ဦး တည်းတွင်သဘာဝတရားနှစ်ခုပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ သူ ... သား
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားရှင်၏တတိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးခမည်းတော်မှသားတော်မှတစ်ဆင့်ထာဝရထွက်သွားသည်။ သူသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယုံကြည်သူအားလုံးကိုဘုရားသခင်စေလွှတ်မည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌နေထိုင်သည်၊ ခမည်းတော်နှင့်သားတော်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစည်းလုံးစေပြီးနောင်တတရားနှင့်သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေပြီးခရစ်တော်၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီမွမ်းမံခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲပေးသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်မှုတ်သွင်းခြင်းနှင့်ပရောဖက်ပြုခြင်း၏ရင်းမြစ်၊
အကျယ်ပြန့်ဆုံးသဘောအရ၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ဘုရားသခင်၏ အချုပ်အခြာအာဏာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အုပ်စိုးမှုသည် အသင်းတော်နှင့် သူ၏အလိုတော်ကို နာခံသော ယုံကြည်သူတိုင်း၏ အသက်တာတွင် ထင်ရှားနေပြီဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာပြီးနောက်၊ အရာခပ်သိမ်းသည် လက်အောက်ခံဖြစ်သောအခါတွင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် အပြည့်အ၀တည်လိမ့်မည်။ (ဆာလံ 2,6-9; ၂၈.၃3,1စာ-၁၁; လုကာ ၂7,20စာ-၄၈; ဒံယေလ 2,44; မားကပ် 1,14နှစ်ဆယ် 1. ကောရိန္သု ၁5,24စာ-၂၈; epiphany 11,15; ၂၁.၃.၂၂-၂၇; ၂2,1-5) Das gegenwärtige und zukünftige…
ဘုရားသခင်သည်လူပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီယောက်ျားနှင့်မိန်းမကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကလူကိုကောင်းချီးပေးပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့၊ ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်လူသားအားကမ္ဘာမြေကြီးကိုဘဏ္ardာစိုးအဖြစ်အုပ်စိုးရန်နှင့်၎င်း၏သတ္တဝါများကိုအုပ်ချုပ်ရန်တန်ခိုးပေးခဲ့သည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းဇာတ်လမ်းမှာတော့လူသားဟာဖန်ဆင်းခြင်းသရဖူဖြစ်တယ်။ ပထမဆုံးလူသားအာဒံဖြစ်တယ်။ အပြစ်ပြုခဲ့သောအာဒံ၏ပုံဆောင်သဘောအရလူသားများသည်၎င်း၏ဖန်ဆင်းရှင်ကိုပုန်ကန်။ နေထိုင်ကြပြီး ...
ကျမ်းစာသည်ဘုရားသခင့်မှုတ်သွင်းခံစကားတော်၊ ospel ၀ ံဂေလိတရား၏သစ္စာရှိသောသက်သေခံချက်နှင့်လူတို့အားဘုရားသခင့်ဖွင့်ပြတော်မူခြင်း၏မှန်ကန်သောတိကျမှန်ကန်မှုကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ်စနှင့်စပ်လျဉ်း။ အယူဝါဒနှင့်ဘဝမေးခွန်းများအားလုံးသည်သန့်ရှင်းသောကျမ်းစာသည်မှားယွင်း။ မရနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်မည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့်သခင်ယေရှုမည်သို့သွန်သင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သိနိုင်သနည်း။a၀ ံဂေလိတရားသည်အမှန်တကယ်လားမှားသည်လားကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သိနိုင်သနည်း။ သင်ကြားခြင်းနှင့်အသက်အတွက်မည်သည့်ခိုင်လုံသောအခြေခံရှိသနည်း။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ...
အသင်းတော်သည်ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြီးယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သူ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝပ်တော်မူသောသူတို့၏အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည်။ churchဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောရန်၊ ဗတ္တိဇံခံရန်ခရစ်တော်မိန့်မှာသမျှကိုသွန်သင်ရန်နှင့်သိုးတော်စုကိုကျွေးမွေးရန်အသင်းတော်သည်အသင်းတော်အားအပ်နှင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရာ၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လမ်းပြမှုကိုခံယူသောဘုရားကျောင်းသည်သမ္မာကျမ်းစာကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်ယူပြီးသူမအသက်ရှင်သောသခင်ယေရှုခရစ်ကိုအမြဲတမ်း ဦး တည်သည်။ ကျမ်းစာက "" ခရစ်တော်၌အဘယ်သူရှိသနည်း ""
ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားသူတိုင်းသည် ခရစ်ယာန်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် ခရစ်ယာန်များသည် မွေးဖွားခြင်းအသစ်ကို တွေ့ကြုံခံစားရပြီး ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏လူသားချင်းဆက်ဆံရေးကို မွေးစားခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ရရှိလာပါသည်။ ခရစ်ယာန်တစ်ဦး၏အသက်တာကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသီးဖြင့် အမှတ်အသားပြုသည်။ (ရောမ 10,9စာ-၁၀; ဂလာတိ 2,20; ယော 3,5စာ-၂၀; မားကပ် 8,34; ယော 1,12နှစ်ဆယ် 3,16စာ-၉; ရောမ 5,1; 8,9; ယော ၁3,35; ဂလာတိ 5,22-23) Was bedeutet es, ein Kind…
Engel sind geschaffene Geistwesen. Sie sind mit Willensfreiheit ausgestattet. Die heiligen Engel dienen Gott als Boten und Beauftragte, sind dienstbare Geister für die, die das Heil erlangen sollen, und werden Christus bei seiner Wiederkehr begleiten. Die ungehorsamen Engel werden Dämonen, böse Geister und unreine Geister genannt. Engel sind Geistwesen, Boten und Diener Gottes. (Hebräer 1,14; epiphany 1,1; 22,6; မဿဲ ၂5,31; 2. ဓာတ်ဆီ 2,4; မားကပ် 1,23; မက်သယူး 10,1) ...
စာတန်သည်နာမ်ဝိညာဉ်လောကရှိနတ်ဆိုးများ၏ခေါင်းဆောင်၊ ပြိုလဲသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သည်။ စာတန်မာရ်နတ်၊ ရန်သူ၊ မာရ်နတ်၊ လူသတ်သမား၊ မုသာကိုသုံးသူ၊ သူခိုး၊ သွေးဆောင်သူ၊ ငါတို့ညီအစ်ကိုများကိုစွပ်စွဲသူ၊ နဂါး၊ ဤလောက၏ဘုရား။ သူသည်ဘုရားသခင်အားအဆက်မပြတ်ပုန်ကန်နေသည်။ သူသည်သူ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားဖြင့်လူများကြားတွင်စိတ်ဝမ်းကွဲပြားခြင်း၊ ခရစ်တော်၌သူသည်ရှုံးနိမ့်ထားပြီးဖြစ်သည်၊ သူ၏အုပ်ချုပ်မှုနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဘုရားသခင်အဖြစ် ...
Das Evangelium ist die gute Nachricht über die Erlösung durch Gottes Gnade aufgrund des Glaubens an Jesus Christus. Es ist die Botschaft, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben, nach der Schrift am dritten Tage auferweckt wurde und dann seinen Jüngern erschien. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass wir durch das Heilswerk Jesu Christi ins Reich Gottes eingehen können. (1. ကောရိန္သု ၁5,1-5; တမန်တော်များ၏ လုပ်ရပ်များ 5,31; လုကာ ၂4,46-48; Johannes…
ခရစ်ယာန်အမူအကျင့်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သူ့ကိုယ်သူစွန့်လွှတ်ပေးတော်မူသော ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်အပေါ် သစ္စာစောင့်သိမှုနှင့် ချစ်ခင်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ဧဝံဂေလိတရားနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ ယုံကြည်ခြင်း၌ ဖော်ပြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ခရစ်တော်သည် ယုံကြည်သူများ၏နှလုံးသားများကို ပြောင်းလဲစေပြီး ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ သစ္စာရှိခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ ကြင်နာခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ချုပ်တည်းခြင်း၊ တရားမျှတခြင်းနှင့် သမ္မာတရားတို့ကို အသီးအနှံဖြစ်စေသည်။ (1. Johannes…
အပြစ်တရားသည်မတရားမှုကိုဘုရားသခင်ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သောအခြေအနေဖြစ်သည်။ အာဒံနှင့်Eveဝမှတစ်ဆင့်အပြစ်တရားသည်ဤလောကသို့ ၀ င်ရောက်သော အချိန်မှစ၍ လူသားသည်အပြစ်တရား၏ထမ်းပိုးအောက်၌ရှိနေပြီးသခင်ယေရှုခရစ်တော်မှတစ်ဆင့်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာဖယ်ရှားနိုင်သောထမ်းပိုးကိုထမ်းရွက်သည်။ အပြစ်နှင့်ပြည့်နေသောလူသားတို့၏အခြေအနေသည်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်မိမိအကျိုးစီးပွားကိုဘုရားသခင်နှင့်ကိုယ်တော့်အလိုတော်ထက်သာလွန်ထားလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်တရားသည်ဘုရားသခင်နှင့်ကင်းကွာစေခြင်းနှင့်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်သေခြင်းဆီသို့ ဦး တည်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ...
ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်ပေးသောဆုကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်သားတော်၌အမြစ်တွယ်ပြီးသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျမ်းစာ၌ပါသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏သက်သေခံချက်အားဖြင့်အလင်းကိုရရှိသည်။ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်၏နှလုံးသားနှင့်စိတ်နှလုံးကိုဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၊ ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုလက်ခံစေသည်။ ယေရှုခရစ်တော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းသည်ဝိညာဉ်ရေးအရဆက်သွယ်မှုရှိစေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခမည်းတော်ဘုရားသခင်အားသစ္စာစောင့်သိစေသည်။ ယေရှုခရစ်သည်စာရေးသူဖြစ်ပြီးအပြီးသတ်ဖြစ်သည်။
ကယ်တင်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်လူသားတို့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အပြစ်နှင့်သေခြင်း၏အချုပ်အနှောင်မှဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံး၏ရွေးနုတ်ခြင်းကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်လက်ရှိဘဝအတွက်သာမကယေရှုခရစ်ကိုသခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံသူတိုင်းအားထာဝရကယ်တင်ခြင်းပေးသည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည်ဘုရားသခင့်ထံတော်မှဆုကျေးဇူးဖြစ်ပြီးယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ပေးသောကောင်းမြတ်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိသည်။
ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်၍ ခရစ်တော်၏လက်မှမည်သည့်အရာကမျှသူတို့ကိုမနှုတ်နိုင်တော့ဟုသမ္မာကျမ်းစာကဆိုသည်။ သခင်ယေရှု၏အဆုံးမဲ့သစ္စာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အကြွင်းမဲ့လုံလောက်မှုကိုသမ္မာကျမ်းစာကအလေးပေးဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်သူမသည်လူအားလုံးအပေါ်ဘုရားသခင်၏ထာဝရတည်မြဲသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအလေးပေးပြောကြားပြီး the ၀ ံဂေလိတရားသည်ယုံကြည်သူအားလုံးအတွက်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောဤယုံကြည်စိတ်ချမှု၌ယုံကြည်သူသည် ...
မျှတခြင်းသည် ယုံကြည်သူအား ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်စေခြင်းတည်းဟူသော ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်၏ လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ ခွင့်လွှတ်မှုကို ရရှိပြီး သူ၏သခင်နှင့် ရွေးနှုတ်တော်မူသော အရှင်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းကို ရရှိသည်။ ခရစ်တော်သည် အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ပြီး ပဋိညာဉ်ဟောင်းသည် အသုံးမပြုတော့ပါ။ ပဋိညာဉ်သစ်တွင်၊ ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည် မတူညီသောအခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင်အခြေခံပြီး မတူညီသောသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံသည်။ (ရောမ ၃:၂၁-၃၁; 4,1-၈;...
Der christliche Sabbat ist das Leben in Jesus Christus, in dem jeder Gläubige wahre Ruhe findet. Der wöchentliche Siebente-Tags-Sabbat, der Israel in den Zehn Geboten befohlen wurde, war ein Schatten, der als Zeichen auf die wahre Realität verwies auf unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus. (Hebräer 4,3.၈-၁၀; မက်သယူး 11,28နှစ်ဆယ် 2. မောရှေ ၂၀:၈-၁၁; ကောလောသဲမြို့ 2,16-17) Das Heil in Christus feiern Anbetung ist unsere Antwort auf die gnädigen Taten, die Gott für uns getan hat.…
နောင်တရခြင်း (“နောင်တ” ဟုလည်းပြန်ဆိုသည်) သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှလုပ်ဆောင်ပြီး ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ အမြစ်တွယ်သော စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောင်တရခြင်းသည် လူတစ်ဦး၏ အပြစ်ကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းသောအသက်တာအသစ်နှင့် ပါ၀င်သည်။ (တမန် 2,38; ရောမ 2,4; 10,17; ရောမ ၁2,2) Reue verstehen lernen Eine schreckliche Angst“, lautete die Beschreibung eines jungen Mannes für seine grosse Furcht, Gott habe ihn wegen…
သန့်ရှင်းခြင်းဆိုသည်မှာ ယုံကြည်သူအတွက် ယေရှုခရစ်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းခြင်းကို ဘုရားသခင်က သတ်မှတ်ပေးကာ ၎င်းတွင် ပါဝင်သည့် ကျေးဇူးတော်၏ လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းခြင်းကို ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် တွေ့ကြုံရပြီး လူတို့၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ မျက်မှောက်တော်မှ သက်ရောက်သည်။ (ရောမ 6,11; 1. ဂျိုဟန် 1,8စာ-၉; ရောမ 6,22; 2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 2,13; Galater 5, 22-23) Heiligung Nach dem Concise Oxford Dictionary bedeutet heiligen „aussondern oder etwas heilig halten“, oder „von Sünde…
၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ဘုရားသခင့်ဘုန်းတော်ကိုတုန့်ပြန်စေသောအရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မြတ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံရပြီးသူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းဆီသို့ဘုရားသခင်ထံမိမိကိုယ်ကိုဖွင့်ပြခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာသည်။ ယုံကြည်သူသည်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်မှတစ်ဆင့်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသို့ဝင်သည်။ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာအရာရာတိုင်းတွင်ဘုရားသခင်ကိုနှိမ့်ချစွာ၊ ဒါဟာသဘောထားများနှင့်လုပ်ရပ်များအတွက်သူ့ဟာသူဖော်ပြ ...
Die Wassertaufe Zeichen der Reue des Gläubigen, Zeichen, dass er Jesus Christus als Herrn und Erlöser annimmt ist Teilhabe am Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Das Getauftwerden „mit dem Heiligen Geist und mit Feuer“ bezieht sich auf das erneuernde und reinigende Werk des Heiligen Geistes. Die Weltweite Kirche Gottes praktiziert die Taufe durch Untertauchen. (Matthäus 28,19; တမန်တော်များ၏ လုပ်ရပ်များ 2,38; ရောမ 6,4-5; လု 3,16; 1. ကောရိန္သု ၁2,13; 1. ဓာတ်ဆီ 1,3-9; Matthäus…
သခင့်ညစာစားပွဲသည်အတိတ်ကယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာများ၊ ယခုသူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေး၏အမှတ်အသားနှင့်အနာဂတ်တွင်သူလုပ်ဆောင်မည့်အရာများအားသတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ စက္ကမင်မင်္ဂပွဲကိုကျွန်ုပ်တို့ကျင်းပသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ကိုသတိရရန်နှင့်သူမလာမှီသူ၏သေခြင်းအကြောင်းကြေညာရန်မုန့်နှင့်ဝိုင်ကိုယူသည်။ သခင့်ညစာစားပွဲသည်ငါတို့သခင်၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ သူသည်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေး၍ အသွေးသွန်းပြီးကျွန်ုပ်တို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရရန်ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်ဘဏ္financialာရေးဘဏ္ewာရေးဆိုသည်မှာဘုရားသခင့်မေတ္တာတော်နှင့်ရက်ရောမှုကိုထင်ဟပ်စေသောကိုယ်ပိုင်အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရန်ပုံငွေအချို့ကိုဘုရားကျောင်း၏လုပ်ငန်းအတွက်လှူဒါန်းရန်ကတိကဝတ်များပါဝင်သည်။ given ၀ ံဂေလိတရားကိုဟောရန်နှင့်သိုးတော်စုကိုကျွေးမွေးရန်ဘုရားပေးဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်အလှူငွေများဖြင့်ကျခံသည်။ လှူဒါန်းခြင်းနှင့်လှူဒါန်းခြင်းသည်ကြည်ညိုလေးမြတ်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ နာခံခြင်းနှင့် ...
Das Haupt der Kirche ist Jesus Christus. Er offenbart der Kirche den Willen des Vaters durch den Heiligen Geist. Durch die Schrift lehrt und befähigt der Heilige Geist die Kirche, den Bedürfnissen der Gemeinden zu dienen. Die Weltweite Kirche Gottes ist bestrebt, bei der Betreuung ihrer Gemeinden und auch bei der Ernennung von Ältesten, Diakonen, Diakoninnen und Leitern der Leitung des Heiligen Geistes zu folgen. (Kolosser 1,18; ဧဖက် 1,15စာ-၁၁; ယော ၁6,13-၈;...
ပရောဖက်ပြုချက်သည် လူသားများအတွက် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် အစီအစဉ်ကို ဖော်ပြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်တွင်၊ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်၏ ရွေးနုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို နောင်တရခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူ့အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ကြောင်း ကြေငြာထားသည်။ ပရောဖက်ပြုချက်သည် ဘုရားသခင်အား အနန္တတန်ခိုးရှင် ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် တရားသူကြီးအဖြစ် ကြွေးကြော်ထားပြီး လူသားများကို သူ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကျေးဇူးတော်နှင့် သစ္စာစောင့်သိမှုတို့ကို အာမခံပြီး ယုံကြည်သူအား ယေရှုခရစ်၌ ဘုရားတရားရှိစွာ အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။ (ဟေရှာယ ၄6,9စာ-၁၁; လုကာ ၂4,44-၈;...
ကတိပြုထားသည့်အတိုင်း၊ ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင် လူအားလုံးကို တရားစီရင်ရန်နှင့် အုပ်ချုပ်ရန် မြေကြီးပေါ်သို့ ပြန်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ဘုန်းတန်ခိုးတော်ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်သည် သန့်ရှင်းသူတို့၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ဆုလာဘ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ (ယော ၁4,3; epiphany 1,7; မဿဲ ၂4,30; 1. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,15စာ-၁၇; ဗျာဒိတ် ၂2,12) ခရစ်တော်ပြန်လာမှာလား။ ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံမှာ အကြီးကျယ်ဆုံး ပွဲဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ...။
ယုံကြည်သူများ၏အမွေသည် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအဖြစ် ခရစ်တော်၌ ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ထာဝရအသက်ဖြစ်သည်။ ယခုပင် ခမည်းတော်သည် ယုံကြည်သူများအား သားတော်၏နိုင်ငံတော်သို့ လွှဲပြောင်းပေးတော်မူ၏။ သူတို့၏အမွေကို ကောင်းကင်ဘုံ၌ သိမ်းဆည်းထားပြီး ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာချိန်တွင် ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်သောသန့်ရှင်းသူများသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တွင် စိုးစံကြသည်။ (1. ဂျိုဟန် 3,1နှစ်ဆယ် 2,25; ရောမ ၈:၁၆-၂၁; ကောလောသဲမြို့ 1,13; ဒံယေလ 7,27; 1. ဓာတ်ဆီ 1,3-၈;...
ငရဲသည်အမှားအယွင်းမရှိသောအပြစ်သားများရွေးချယ်သောဘုရားသခင်နှင့်ခွဲခွာခြင်းနှင့်ကင်းကွာခြင်းဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ငရဲကိုမီးအိုင်၊ “ မှောင်မိုက်” နှင့်ဂေဟင်္နာ (ဂျေရုဆလင်အနီးရှိဟိန္နုံချိုင့်ဝှမ်းအပြီးအမှိုက်သုတ်ရန်နေရာ) ဟုရည်ညွှန်းထားသည်။ ငရဲကိုအပြစ်ပေးခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ညှဉ်းဆဲခြင်း၊ ထာဝရပျက်စီးခြင်း၊ ရှီးအိုးလ်နှင့်ဟေးဒီးစ်၊ အသုံးအနှုန်းနှစ်ခုကိုမကြာခဏသမ္မာကျမ်းစာမှ "ငရဲ" နှင့် "သင်္ချိုင်း" ဟုဘာသာပြန်ထားသော ...
“ကောင်းကင်” သည် သမ္မာကျမ်းစာအသုံးအနှုန်းအဖြစ် ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားသော ကျိန်းဝပ်ရာနေရာအပြင် ဘုရားသခင်၏ ရွေးနှုတ်ခံရသော ကလေးများအားလုံး၏ ထာဝရကံကြမ္မာကို ရည်ညွှန်းသည်။ “ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိခြင်း” ဆိုသည်မှာ သေခြင်း၊ ညည်းတွားခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်းနှင့် နာကျင်ခြင်း မရှိတော့သော ခရစ်တော်၌ ဘုရားသခင်နှင့်အတူ တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်ဘုံကို “ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်း”၊ “ပျော်ရွှင်မှု”၊ “ငြိမ်သက်ခြင်း” နှင့် “ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း” အဖြစ် ဖော်ပြသည်။ (1. ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင် 8,27နှစ်ဆယ် 5. မောရှေ ၁6,15; မက်သယူး 6,9; တမန်တော်များ၏ လုပ်ရပ်များ 7,5၅-၅၆; ယော ၁4,2စာ-၁၇; ဗျာဒိတ် ၂1,3-4; ၂၈.၃2,1-5; 2.…
အလယ်အလတ်ပြည်နယ်သည် လူသေများ ရှင်ပြန်ထမြောက်သည့်တိုင်အောင် တည်ရှိနေသည့် အခြေအနေဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာကျမ်းဂန်များ၏အနက်ကိုမူတည်၍ ခရစ်ယာန်များသည် ဤအလယ်အလတ်အခြေအနေ၏သဘောသဘာဝကို မတူညီသောအမြင်များရှိသည်။ အချို့သော ကျမ်းပိုဒ်များက သေလွန်သူများသည် ဤအခြေအနေကို အသိစိတ်ဖြင့် တွေ့ကြုံခံစားရပြီး အခြားသူတို့၏ အသိစိတ် ပျက်သွားသည်ဟု ညွှန်ပြသည်။ အမြင်နှစ်ခုစလုံးကို လေးစားသင့်သည်ဟု ကမ္ဘာချီဘုရားရှိခိုးကျောင်းက ယုံကြည်သည်။ (ဟေရှာယ ၁4,9-10; Hesekiel…
Ein Glaubensbekenntnis (Credo, von lat. „Ich glaube“) ist eine zusammenfassende Formulierung von Glaubensinhalten. Es will wichtige Wahrheiten aufzählen, Lehraussagen klarstellen, Wahrheit von Irrtum trennen. Es ist meist so gehalten, dass es leicht auswendig gelernt werden kann. Eine Reihe von Stellen in der Bibel haben den Charakter von Glaubensbekenntnissen. So verwendet Jesus die Schema, basierend auf 5. ကြွက် 6,4-9, als Glaubensbekenntnis. Paulus macht…